Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1454
12 000 ny mponina ao amin’ny fokontany Ankorondrano Andranomahery ary 40% amin’ireo tena sahirana avokoa, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fokontany, Ramanantany Alain, ny asabotsy teo. Mivelona amin’ny asa madinika ny ankamaroan’ny vahoaka. Ho fanampiana azy ireo amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao, nanolotra sakafo ho an’ny olona 1 000 mahantra ao anatin’ny faritra valon’ny fokontany ny tanora ao […]
Tranoben’ny varotra Toliara : mitaky ny fitantanana ny seranan-tsambo
Taorian’ny fifidianana ny 21 novambra 2015, namantarana ireo olona 34 misolo tena ny mpandraharaha ao anatin’ny Tranoben’ny varotra anatin’ny faritra Toliara. Voafidy ny 30 desambra 2015 kosa ny filoha vaovao, Razafitombo Elijaona, avy amin’ny fikambanan’ny mpandraharaha Geso, maro anisa ao anatin’io antenimieran’ny Varotra aty Toliara. Nahazo vato 28 Razafitombo Elijaona raha 6 kosa ny an’ny […]
Nandritra ny fotoana fifampiarahaban’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola ny taona vaovao 2016, ny faran’ny herinandro teo teny Andranovelona, nitondran’ny minisitra Rakotoarimanana Gervais fanazavana bebe kokoa ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Resaka nifanaovana tamin’ny gazety Taratra. -Gazety Taratra : Andriamatoa minisitra, amin’izao fotoana izao isika miankina betsaka amin’ny fanampiana avy any ivelany. Nilaza ny […]
Zafinandro Viviane Dewa : hanarina ny fizahantany any Anosy
Mbola voafidy filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Office régional de tourisme faritra Anosy, Rtoa Zafinandro Viviane Dewa. Tsy vahiny any an-toerana izy satria mahafantatra tsara ny tontolon’ny fizahantany. Misy ny ezaka efa vitany fa betsaka ihany koa ny asa miandry azy sy ireo mpandraharaha tanora miaraka aminy any Taolagnaro ho fiatrehana ireo sakana maro nampihemotra ny fizahantany any […]
Grand Tournoi de Pétanque doublette Boss : hiatrika ny «Star Masters de Thaillande” ny mpandresy
Par Taratra sur 11/01/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hafana indray ny fihaonana eo amin’ny taranja tsipy kanetibe, amin’ity satria hisy ny fiadiana tapakila, hiatrehana fifaninanana iraisam-pirenena, hatao any Thaillande. Fihaonana karakarain’ny FBCT Mahamasina. Halefan’ny klioba FCBT, miatrika ny andiany fahenina amin’ny “Star Masters de pétanque”, hatao any Thaillande, ny 25 – 27 febroary, ho avy izao, izay ho mpandresy amin’ny “Grand tournoi de […]
Tenisy – «Afrique Australe 2016» : nandravarava ny mpilalao malagasy
Tsara fanombohana ny katitakely malagasy eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja tenisy, ho an’ny faritra tapany atsimo na ny «Afrique Australe». Saika nahazo fandresena avokoa izy ireo, tamin’izany. Fandresena sivy, tamin’ireo lalao folo natrehiny no azon’ny ekipa malagasy, teo amin’ny andro voalohany, notanterahina ny asabotsy lasa teo, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i […]
Kick-boxing : nakotroka ny fandraisan’i Toliara an’i Severin
Tonga tany Toliara, omaly alahady i Mamonjisoa Severin, tompondaka eran-tany amin’ny kick-boxing ISKA Pro, latsaky ny 60 kg. Nafana ary tena nakotroka ny fitsenana ity maherifon’ny firenena ity. Feno vahoaka, nanofahofa ny sainam-pirenena sy ny sarin’i Severin, ny lalana rehetra nalehany, tao an-tampon-tananan’i Toliara. Sesilany ny vola sy ny fanomezana natolotr’ireo manampahefana sy ny olon-tsotra […]
Misy fahavononana. Araka ny fandaharam-potoan’ny federasion’ny karate eto Madagasikara (FKM), anisan’ny hetsika mandrafitra ny taom-pilalaovana 2016 ny fiadiana ny tompondaka eran-tany. Noho izany, efa mivonona sahady amin’ny fiatrehana io fifaninanana iraisam-pirenena io izy ireo. Marihina mantsy fa hotanterahina any Linz, Autriche, ny volana oktobra 2016, ny andiany faha-23 amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany eo amin’ny […]
« Précédent 1 … 1 452 1 453 1 454 1 455 1 456 … 1 461 Suivant »